Warshadaha Gearboxesyada, Matoorrada Warshadaha, Awoodda Gearbox Sare - Intech
U siiso macaamiisha adduunka xalalka qalabka warshadaha.
NINTBO XIRIIR FARSAMO FARSAMO, qalabka xawaaraha. Bixinta qalabka ugu horumarsan iyo qalabka gudbinta, kor u qaadista iyo cusbooneysiinta jiritaanka iyo qalabka gudbinta, wadista habeysan iyo qalabka gudbinta ee dalabka gaarka ah iyo xirfada leh.
INTECH, oo ay taageerayaan in ka badan 10 khubaro gudbinta ah oo in ka badan 30 sano ah naqshadeynta iyo khibradaha soo saarista ee haydarooliga, matoorka korantada, aagga qalabka, waxay isticmaashaa barnaamijka KISSSYS, software-ka FEA, 3D CAD softiweerka iyo is-gaarsiinta gaarka ah ee degdegga ah nidaamka soo koraya, oo ku saleysan faa'iidooyinka qaybaha wax soo saarka kutlada ee Shiinaha, iyadoo la raacayo nidaamka QC-da horumarsan iyo qalabka cabbiraadda horumarsan, warshad isku dubaridan oo nadiif ah oo heer sare ah oo aan waxyeello soo gaarin iyo aaladda tijaabada culeyska si loo bixiyo tan ugu horumarsan, kalsoonida iyo wadista dhaqaalaha iyo qalabka gudbinta ee gaarsiinta ugu gaaban
INTECH waxay u heellan tahay bixinta naqshad wanaagsan, alaab tayo sare leh oo loogu talagalay dalabaadka shuruudaha sare. Wax soo saarkayaga ayaa si weyn loogu isticmaalay shirkadaha adduunka caanka ka ah ee Australia, USA, Brazil, Chile iyo iwm.
Alaabteenna ugu muhiimsan oo ay ka mid yihiin gearbox-ka meeraha haydarooliga, matoorka safarka ku shaqeeya ee haydarooliga, winch-ka korontada ku shaqeeya, qalabka wax lagu karsado, qalabka wax lagu iibiyo, qalabka wax yareeya, qalabka wax lagu gooyo, qalabka gawaarida lagu shubo, qalabka gawaarida lagu riixo, madaxa gawaarida gawaarida, qalabka wax lagu beddelo, qalabka hoos u dhaca is-qufulka iyo iwm.
Wax soo saarka ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha oo ay ka mid yihiin sibidhka, samaynta waraaqaha, nudaha & Fibreerka, ka shaqaynta Sonkorta, hawlaha marinada iyo dekedda, Macdanta & Macdanta, Saliida & Gaaska, soosaarka Cadka, Soo saarida Awoodda, Tareenka, Qashinka lagu farsameeyo, Qashinka birta iwm.
INTECH waxay ku adkeysaneysaa "sii wanaajinta" si loo sameeyo hufnaan sare, kalsooni badan, wax soo saar dhaqaale.
Shaybaadh iskaa loo leeyahay
Isu urursiga waxyeellada
Imtixaan xamuul ah kahor aqoon-isweydaarsiga hore
3 sano damaanad
La aqbalay hoos u dhaca Customized ee qalabka wadista
7 * 24h khadka tooska ah ayaa looga jawaaba
Xarunta adeegga deegaanka
Taageero hagitaan farsamo caalami ah
Miis gear rullaluistemadka rullaluistemadka Slab qalabaysan ...
Haddii aad u baahan tahay xal warshadeed ... Adiga ayaa diyaar kuu ah
Waxaan bixinnaa xalal cusub oo loogu talagalay horumarka waara. Kooxdayada xirfadleyda ah waxay ka shaqeeyaan sidii loo kordhin lahaa wax soo saarka iyo qiimaha wax ku oolka suuqa